Home News Hubkii Ugu Badnaa oo Mar Kale Lagala Baxay Xereda Jeneraal Gordan ee...
Hubkii Ugu Badnaa oo Mar Kale Lagala Baxay Xereda Jeneraal Gordan ee Imaaraadka ku Tababari Jiray Ciidanka Soomaaliya.
Ciidanka DANABD ee lagu wareejiyay Xerada Tababarka ee Generaal Gordan ayaa la sheegayaa iney la baxeen saanad ciidan oo aad u culus,sida ay inoo sheegeen Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya.
Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee DANAB ayaa la wareegay Xerada Generaal Gordan ka dib markii ay soo noq noqdeen dagaalada ka dhaca xeradaasi eek u dhexmaraya Ciidan uu tababaray Imaaraadka Carabta iyo kuwa Dowladda Soomaaliya.
Saanada Ciidan ee laga xaday Xerada ayaa lagu sheegay iney isugu jiraan Hub culus iyo kuwa fudud,waxaana sidoo kale xerada lagala baxay gaadiid Ciidan oo ay Imaaraadka ugu talageen Ciidanka ay tababarka siiyeen iney ku howlgalaan.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Taliska Ciidanka Xoogga dalka oo arrintaan ka war helay si hoose u wado baaritaan ku aadan sidii lagu soo heli lahaa Ciidanka iyo Saraakiisha xaday Agabkaasi Ciidan.
Imaaraadka Carabta oo tababaray Ciidamo Soomaali oo ka badan 2-kun oo askari ayaa Xerada Generaal Gordan kaga tagay sanad Ciidan oo aad u fara badan,taasi oo sababtay in la isku dagaalo.